Health Archives - Top MM News
အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာတတ်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး ဆေးနည်း
လည်ချောင်းနာ အာသီးရောင်နေလျှင် ၁ – ရေနွေးဖြူ ထဲကို အိမ်သုံးဆား ၁ ဇွန်း ထည့် မွှေပါ – ရရှိလာသည့်ဆားရည် နွေးနွေးကို အာခေါင်တွင်းသို့ ရောက်အောင် ခေါင်းမော့ပြီး ပလုပ်ကျင်းပေးပါ။ ၂ – နောက်တနည်း – သဘောင်္သီး နုနုထွတ်ထွတ် ၁ လုံးကို အပင်မှ ခူးပြီး
alpha | June 1, 2020
မျှစ်ကိုကြိုက်လို့သာ စားနေတာ အခုကစပြီး အရင်ထက်ပိုပြီး စားဖြစ်အောင်စားရတော့မယ် . . . မျှစ်အကြောင်းကို မသိပဲ ကြိုက်လို့သာ စားနေတာ..အခုကစပြီး အရင်ထက်ပိုစားတော့မယ်…ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်လိုက်နော် မြန်မာ လူမျိုးတွေက မျှစ်ကို ကြော်ချက်ပြီး ဟင်းလျာ အမျိုးမျိုး ပြုလုပ် စားသောက် တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှစ်တွေကို ဆေးဆိုးထားတယ် ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်လာပြီးနောက်မှာ
ကြွက်တွေမှာ စမ်းသပ်တာအောင်မြင်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံဟာ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးကိုစတင်စမ်းသပ်(ဝါးရင်းတုတ်နဲ့မျိုးချစ်လို့ကောင်းနေကြတဲ့လူမိုက်တွေကို အသိတရားအမြန်ရစေချင်ပါပြီ )
alpha | May 21, 2020
ကြွက်တွေမှာ စမ်းသပ်တာအောင်မြင်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံဟာ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးကိုစတင်စမ်းသပ်(ဝါးရင်းတုတ်နဲ့မျိုးချစ်လို့ကောင်းနေကြတဲ့လူမိုက်တွေကို အသိတရားအမြန်ရစေချင်ပါပြီ ) 🐁 ကြွက်တွေမှာ စမ်းသပ်တာအောင်မြင်တဲ့အတွက် mRNA (messenger RNA) ကာကွယ်ဆေးကို 🐒 မျောက်တွေမှာ နောက်အပတ်မှာ စတင်စမ်းသပ်ပါမယ်တဲ့။ 💉 ထိုင်းနိုင်ငံဟာ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးကို #နောက်နှစ်ထဲမှာ ရရှိနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက Covid-19 ကာကွယ်ဆေးဟာ
သွေးကျဲဆေးတွေက Covid-19 အတွက် အသက်ကယ်ဆေး ဖြစ်လာနိုင်မလား?
alpha | May 19, 2020
သွေးကျဲဆေးတွေက Covid-19 အတွက် အသက်ကယ်ဆေး ဖြစ်လာနိုင်မလား? ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် အဓ်ကသေဆုံးရမှု၊ အထူးကြပ်မတ်ဆောင်ပို့ပြီး ကုသရတဲ့ထိ အခြေအနေဆိုးရွားမှုတို့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သွေးများခဲလာခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်တာကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ သွေးကျဲဆေးများက Covid-19 လူနာတွေ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် ထိရောက်တဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်သလို ဗန်တီလေတာသုံးပြီး ကုသရတဲ့ အခြေနေမျိုးထိမရောက်အောင် လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ လက်တလော အမေရိကန်သုတေသန လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှာ အကြံပြုထားပါတယ်။
alpha | May 14, 2020
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲရဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်မှုအရ ဗီတာမင် ဒီ (vitamn D) အလွန်အမင်း ချို့တဲ့မှုနဲ့ COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းကြား အခိုင်အမာ ဆက်နွယ်မူရှိနေ ဗီတာမင် ဒီ အလွန်အမင်း ချို့တဲ့နေတဲ့ COVID-19 လူနာတွေဟာ သေဆုံးမှုအပါအဝင် ပြင်းထန်တဲ့ ထပ်တိုးရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ NU ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ မေ
အဆိုး ထဲက အေ ကာင်းတစ်ခု ရန်ကုန်မြို့ က လေ ထု
alpha | May 13, 2020
အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခု ရန်ကုန်မြို့က လေထု အဆိုး နှင့် အကောင်း ဖြစ်စဉ်တို့သည် အမြဲ ဒွန်တွဲဖြစ်ပေါ်နေတတ်သည်ဟု လောက နိယာမ တရားအရဆိုဆို၊ ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့် ကျိုးကြောင်းပြဆိုဆို မလွဲသောတရားများ ဖြစ်သည်။ ဒါ့ကြောင့် လူတို့ဝန်းကျင်၌ဆိုတတ်ကြ သည် “အဆိုးကြီးပဲ အမြဲမလာပါဘူးကွာ၊ အကောင်းလည်း တစ်လှည့်လာတတ်ပါ တယ်”ဟု ရည်ညွှန်းစကား ဆိုတတ်ကြပါ သည်။
alpha | May 8, 2020
ရုတ်တရက် အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး အိပ်ရေမဝသလိုဖြစ်နေရင် အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မူးဝေသလို၊ အိပ်ရေမဝသလိုဖြစ်နေရင် ဒီနည်းလေး စမ်းသုံး ကြည့်ပါ “အားအင်ကုန်ခမ်းမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် မူးဝေခြင်းကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေသည့် ကြက်ဥသံပုရာဆမ်းဆေးတစ်ခွက်” အလုပ်ပင်ပန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်၊အားအင်ကုန်ခမ်းလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊မူးဝေနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးနည်းတစ်လက် ကိုမျှဝေပေးပါ့မယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ (1) ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံး၊ (2) သုံပုရာသီးအမှည့်တစ်လုံး၊ (3) သကြားဖြူဟင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်းတို့ကိုဖေါက် ထည့်ရောမွှေပေးပါ။ သံပုရာအစေ့တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်ရောမွှေ ပြီးသောက်ပေးရင်အမောအပန်းပြေပြီးအားရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းကကျွန်တော့်ဖခင်ပေးတဲ့ရိုးရာဆေး
phyo | May 6, 2020
Examine the above question: 1. The properties of garlic; 2. The properties of honey; 3. Garlic changes in honey; 4. There are four sections that are not suitable
alpha | January 22, 2020
Mother isareal superhero for her children. When you are with your mother, you feel more secure and are always looking for you. Mothers like these have